In labaatankii sano ee la soo dhaafay fanaaniinta music Australia u yimid in ay safka hore iyo heysatay goobta music iyo waxa ay ka heartthrobs ee Millennial. Style weheliso tayadooda muusikada ay soo jiidashada iyo wuxuu u liibaanay dhab gaadhay la caadiga ah. Inta badan waxay ku guuleystay caalami ugu dhaqsaha badan ka dib markii olole caalami ah oo ay ugu horeysay ee EPS, albums oo kali. Fanaaniinta music Australia, waa loo riyaaqay kaliya ma ahan talanti ay muusikada laakiin sidoo kale ka danbeeya video camera u shaqeeyo. Marka la eego hoos ku qoran waa top 20 fanaaniinta Australia in ka dhigteen in ay hogaanka ku guuleystay abaalmarino badan, sharaf iyo abaalmarino.
2.Birds ee Tokyo
9.Architecture ee Helsinki
15. Ragga Ugu Work
16. guri oo ciriiri ah
20. 5 ilbiriqsi ee Summer
Conrad Sewell bilaabay in aan heeso da'da yar oo u dhaqaaqay Los Angeles inay ku baaqaan in xirfadda muusikada iyo shaqeeyay fanaaniin badan oo caan ah sida music Christina Aguilera, Joss Stone, One Direction iyo tareenka. In 2015 uu ku dhawaaqay inuu furitaanka Ed Sheeran ayaa safar Australian uu ku qoray bogga Facebook. Hit lambarada waxaa ka socda.
Kor ii hay
2) haadka Tokyo:
Shimbiraha ee Tokyo waa Koox shan-piece ayaa dhagaxayga weyn iyo album ugu horeysay ee ay "Maalinta One" gaareen No. 3 on gooldhalinta AIR Independent Album. Tan iyo markaas ay sii daayay albums badan sida "Universes" ee 2008, "haadka Tokyo" ee 2010, iyo "Dabka March" ee 2013-hit tirada ay yihiin kuwa soo socda.
Wild Ugu Heart
Jarryd James waa heesaa-Xisbi iyo soo saare oo ku sifayn of music waa Electronica. Waxa uu ku dhashay Brisbane, Australia. Waxa uu soo galay goobta ee 2014 iyo waxa uu leeyahay magacyada record calaamad u gaar ah "Jarryd James Music. Dabayaaqadii 2014 safar ay James taageeray karnona iyo Angus iyo Julia Stone on 2015 safar. Hit lambarada waxaa ka socda.
4) Little Badda:
Badda Little waa pop-dhagax weyn halabuurka band ee Andy Butler, Oliver Kirby, Leighton iyo Dylan Clark in waxaa la sameeyay sanadkii 2013 iyo saxiixay Sony Music Australia ah. In 2014 Channel V magacaabay band ee Oz Artist of the Year. Badda Little bilaabeen safarkooda Australia ee July 2015. hit tirada ay yihiin kuwa soo socda.
Tkay Maidza waa heesaa Australia ku dhashay Zimbabwe. Sannadkii 2013, waxaa la ciyaaray Brontosaurus hal non-album ah in halkii No. 12 ee jagooyinka shaxda Australian Urban. Waxay sii daayay iyada album "Tape Switch" ee 2014 iyo hits kaliya ee ay leeyihiin album soo socda yihiin.
Iggy Azalea dhaqaaqay Maraykanka ka Australia inay ku baaqaan in mustaqbalkiisa iyada music oo saxiixay heshiis lagu duubo la Grand dhaqdhaqaaqa 2012 Her cinwaankeedu Art juhalo ah ayaa la sii daayay sanadkii 2011 Azalea ee 2014 heshay laba American Music Awards oo ay la socdaan afar magacaabidda more mixtape. Hit lambarada waa soo socda.
Halabuurka ah laba walaalo ah Malcolm iyo Angus Young AC / DC waa Koox adag dhagax weyn la aasaasay sannadkii 1973 loo arkaa in ay Horseedka ee biraha culus. Sanadkii 2010 AC / DC ku guuleystay abaalmarinta Grammy ee Performance Best Hard Rock. Intaa waxaa dheer in ay sidoo kale ku guuleystay Grammy Awards ay hits soo socda.
Rock 'N Roll tareenka
The mandiil ee Edge
Wouter Andre "Wally" De Backer waa si fiican u yaqaan Gotye oo waa multi-instrumentalist iyo fanaanada-Xisbi. Waxa uu xubin ka yahay Melbourne indie-pop Seddexda ciyaaryahan ayaa Aasaaska. Gotye ku guuleystay 4 Grammy Awards 2012 oo badisay 10 Grammy Awards 2013 Qaar ka mid ah hits uu ka mid ah kuwan soo socda
Qof Si aan u ahaydeen kuwo aan ogayn
Out Halkan dhaxanta
Hearts bannaanka ah
9) Architecture ee Helsinki:
Architecture ee Helsinki ayaa lagu yaqaanaa in shan albums studio ay: faraha ka gudbeen, Xaaladdan oo aan dhiman, Places sidan oo kale, Moment qallooca iyo Hadda + 4EVA. Waxa ay si weyn ugu kormeeray dhan Australia, Yurub iyo USA. Qaar ka mid ah hits kaliya in iyaga kasbadeen warkiisiina caalamiga ee soo socda.
Waxaan ku noolaan Kartid
Riyo Little Crazy
Waxa asaasay 2009 San Cisco waa urur pop Australia indie in loo magacaabay for J Award dhiraandhiriyeen ee November 2011. Waa urur afar-gabal in uu ka kooban yahay Jordi Davieson, Josh Biondillo, Nick Gardner iyo Scarlett Stevens. Hits dhagax weyn pop indie waa soo socda.
Tahay wadajir ah Time
11) Jezabels The:
Jezabels ayaa waxaa la sameeyay sanadkii 2007. Waxay sii daayay ay u saftay Maxbuuska album studio 2011 in markii dagaalku No. 2 Chart Aria Qaasaali. Waxay ku guuleysteen Australian Music Prize ee 2011 ay album labaad Brink ayaa la sii daayay 2014 band ayaa soo saaray hits badan hal ka mid yihiin kuwan soo socda.
Aad u baahan tahay
Time in aad la dheesho
Boy & Bear waa urur music dhagax weyn-qoom indie in waxaa la sameeyay sanadkii 2009 halabuurka ee David Hosking, Killian Gavin, Timothy Hart, David Symes iyo Jonathan Hart. Sannadkii 2011, waxay ku guuleysatay 4 Awards Aria iyo 1 APRA Award. Waxa sidoo kale lagu magacaabay for Best Australian Act ee 2014. Live band ayaa soo saaray hits badan hal ka mid yihiin kuwan soo socda.
Part Time Muslinka
Guy Sebastian ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Idol Australia 2003. Waxa uu sii daayay 8 toban albums sare oo ay ku jiraan 2 tirada kuwa. Sebastian ayaa loo magacaabay oo uu ku guulaystay abaalmarino kala duwan ee mustaqbalkiisa ciyaareed oo ay ku jiraan Channel V Artist of the Year. Uu hits socda ahaayeen guul ganacsiga.
Malaa'igta halkan ii soo gaadhsiisay
Dhammaan waxaan u baahan tahay in aad yahay
Brothers Farriss ayaa sameeyay INXS, waxaa loogu dhawaaqaa sida "ku xad-dhaaf ah", sanadkii 1977. Sannadkii 1980 waxa ay sii deysay album is-cinwaankeedu yahay. Band ayaa ku guuleystay abaalmarinta 6 Australian Rikoodh Industry Association, oo ay ku jiraan 'Best Group ee 1987, 1989 iyo 1992. IXXS iibiyey 45 malaayiin diiwaanka dunida oo dhan oo ay ku jiraan hits soo socda.
Waxa kaliya ee
15) Ragga Ugu Work:
Ragga at Work waa halabuurka ah 5-nin band ee Colin Hay, Jerry Speiser, Ron Strykert, Greg Ham iyo John Rees. In 1983, waxay ku guuleysatay abaalmarinta Grammy ee farshaxanka category New ugu fiican. Band ayaa waxaa ku qoran No. 4 ee 20111 on APRA Top 30 songs Australia. Ragga Shaqada iibiyey in ka badan 30 million oo albums oo caalamka ka mid ah in hits soo socda.
Yaa Waxay noqon kartaa Hadda?
16) oo ciriiri ah guriga:
Neil Finn, Paul Hester iyo Nick Seymour, kuwaas oo markii dambe ku biiray by Tim Finn, Mark Hart iyo Matt Sherrod aasaasay isugu House ee 1985. Waxay sii daayay ay album is-cinwaankeedu ahaa ee 1987. In 1994 guutadii ayaa loo magacaabay kooxda International of the Year. Oo ciriiri ah House ayaa guul ganacsi oo ay hits soo socda.
Ha Dream Waa In ka badan
Wax Sidaas Strong
Icehouse markii ugu horaysay la aasaasay sanadkii 1977 oo markii hore lagu yaqaano style dhagax weyn pop laakiin ay gaadhin guul caadiga by ciyaaro la ruxruxo iyo synthpop music cusub. Band ayaa waxaa laaluusheen in Aria Hall of Fame 2006. Icehouse ayaa guul ganacsi oo ay ka dib kali hit.
Land Southern Great
3 walaalo Barry, Robin iyo Maurice Gibb sameeyay Bee Gees ee 1958dii oo intay iibiyeen in ka badan 220 milyan oo diiwaanka iyaga samaynta fannaaniinta adduunka ugu fiican music iibinta ee waqtiga oo dhan. Band ayaa waxaa degmnada 1997 galay Rock iyo Roll Hall of Fame. Bee Gees ayaa guul ganacsi oo ay la soo socda singes hit.
Waxaad mar kale badino
Waxaad hididiilo lagu My Life
Waa in aad ahaataa qoob
Saqda dhexe Oil oo la asaasay 1972 waxaana uu ku guuleystay 11 Australian Rikoodh Industry Association Awards, oo waxaa lagu degmnada ku riday Hall of Fame 2006. ay album Diesel oo Boorka galay kaalinta No. 1 2010 kitaabkii The 100 Best Qaasaali Australia. Saqda dhexe Oil ayaa guul ganacsi oo ay hits soo socda.
Power iyo dareenkuba
20) 5 ilbiriqsi ee Summer:
5 ilbiriqsi ee Summer waxaa la sameeyay sanadkii 2011 halabuurka ee Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood iyo Ashton Irwin. On the Me qaado Home safar ay kormeeray la One Direction oo warkiisiina wuxuu u kacay inuu caalamiga ah. Tani waxay la socdaan oo ay soo socda hits hal iyaga kasbadeen aqoonsado loona saxiixo muhiim ah.
Waxay muuqata Sidaas Eebaha
Dhegayso Music Free Online aan Saarashada via Goobaha ama Apps ama Radio
> Resource > Music > Top 20 Artists Music Australia